"In lala jiro sheydaanka", oo ah wasaarado cusub oo Apple TV + | Waxaan ka socdaa mac
Iyadoo in ka badan hal sano ay ku jirto suuqa, adeegga fiidiyowga ee Apple ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu suuq yar suuqyada Mareykanka, halkaasoo ay ku leeyihiin joogitaan ka badan kuwa kale ee adduunka. Si kastaba ha noqotee, Apple wali way shaqeyneysaa balaadhi buuggaaga had iyo jeer sharad ku saabsan waxyaabaha asalka ah, oo bixiya dalab aad u xiiso badan laakiin kuma filna isticmaalayaal badan.
Haddii aan ka hadalno nuxurka asalka ah, waa inaan ka hadalnaa taxanaha cusub ee imaan doona Apple TV +. Waxaan ka hadleynaa In lala jiro Ibliis (kala duwan), 6-qaybood oo yaryar oo ay jilayaan Taron Egerton iyo Paul Walter. Tixdu waxay ku jirtaa wajiga hore, markaa waa inaan sugnaa ugu yaraan sannad si aan ugu raaxaysanno.
Tixdan yar waxay ku saleysan tahay sheekada In With the Devil :: Geesi Dhac ah oo ay qoreen James Keene iyo Hillel Levin oo ina tusaya sheekada dilaa taxane ah iyo heshiis qatar ah madax furasho.
Buuggu wuxuu ka warramayaa sheekada Keene (doorka uu ciyaaray Taron Egerton) ee isaga iyo maxbuuskiisa loogu xiray, laguna eedeeyay inuu yahay gacan ku dhiigle, iyo cidda uu isku dayay inuu ka dhaadhici inuu qirto dembiyadiisa oo markaa awood u yeelato inaad xabsiga ka baxdo.
Tixdan yar ee kooban oo ka kooban 6 qaybood, wuxuu sheegayaa sheekada laba maxbuus "Sahaminta dhererka ay dadku u tagayaan madax furashada, haddii saamaxa runta ah ay runti suurtagal tahay, iyo haddii ay tahay, qiime intee le'eg."
Qoraalka iyo soosaarka taxanahan yar ayaa mas'uul ka ah Dennis Lehane (Webiga Mystic) oo ka socda Apple Studios. Bradley Thomas, Dan Friedkin iyo Ryan Friedkin (Imperative Entertainment) waxay u adeegi doonaan sidii soo saare fuliya oo ay weheliyaan Egerton, Richard Plepler (EDEN Productions).
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » "In lala jiro Ibliis", oo ah wasaarado cusub oo loogu talagalay Apple TV +